Mvura yakachena Pearl
Mvura yakachena Pearl Mabheji
Mvura yakachena Pearl Necklace
Mvura yakachena Pearl Bracelet
Mvura yakachena Pearl Mhete
Mvura yakachena Pearl Set
Mvura yemunyu Pearl
Mvura yakachena Maparera
ne admin pane 21-01-12
Mvura yakachena Maparera Mvura yemvura maparera anoreva maparera anogadzirwa munzizi nenzizi. Nzvimbo huru dzinocherwa pearl yemvura muChina ndeZhuji, Changde, Suzhou, Jiangxi, Hubei, uye Anhui. Parizvino, maparera emvura yakachena ari kunyanya ...
Pearl sosi China ndiyo inogadzira maparera emvura yakachena, uye goho rayo rinobata 95% yepasi rose. Kubudirira uye kuvandudzwa kweparera indasitiri kunopa mikana yekuenderera mberi kugadzirisa kweChine ...
Panyama ehupfumi maparera
Panyama zvimiro zvemaparera Iyo yakasarudzika kubwinya kwemaparera kunokonzerwa nekuratidzira uye kupatsanurwa kwechiedza pane aya akajeka nacreous matete. Iyo yakatetepa iyo nacreous layer, yakanyanya kunaka kubwinya. Iyo fluorescence ...
Chenjedzo yekupfeka uye chengetedza maparera zvishongo
Chenjedzo dzekupfeka nekuchengetedza maparera zvishongo Panguva yeKupfeka 1. Mapera haafanire kubata mvura nguva zhinji, uye anofanirwa kubviswa paunenge uchigeza. Maparera anoshamwaridzana neasidhi uye alkaline sipo senge shampoo ...
Zvishongo nezvishongo & Chenjedzo: Zvishongo Allergy
Zvishongo Zvishongo & Chenjedzo: Zvishongo Allergy Isa zvishongo zvako pakupedzisira, uye ubvise pakutanga. Gara uchibvisa zvishongo zvako paunenge uchirovedza muviri uye uchishambira, uye uchiita mitambo. Kazhinji shambidza zvishongo zvako nemachira ekuchenesa. Chengetedza yako j ...
Chimiro chemaparera emvura yakachena
ne admin pane 21-01-11
Maumbirwo emaparera emvura matsva Maparera emvura anouya mune husingaverengeke hwechokwadi hwezvimiro kubva pakuenzana kutenderera kuenda kubaroque uye zvese zviri pakati. Nekuda kwekuwanikwa kwavo nemitengo isingadhuri ivo vari pakati peakanyanya ...
Maitiro ekusiyanisa matsva maparera
Nzira yekusiyanisa matsva maparera # 1. Kucherekedza Iyo inosiyaniswa nemuvara, chimiro, saizi uye kubwinya kweparera. Maparera chaiwo, ruvara, chimiro, uye saizi hazvina kunyatso kufanana. Maparera enhema akakandwa nemuchina mol ...
Maitiro ekupfeka maparera ezvishongo
Mhedzisiro yekupfeka maparera evakadzi Vakadzi vanofarira kupfeka zvishongo zveparera kune rumwe ruoko nekuti zvinyoro uye zvinodziya, izvo zvinogona kutamba chinzvimbo chakanaka kwazvo chekushongedza, kune rimwe divi, nekuti chine huwandu hwakawanda hwebatsiro ...
No18, Jianghai South Road, Nansha, JinGang Town, Zhangjiagang Guta, Jiangsu Province, China